Dhaqaalaha Puntland ma danbiile ayaa magdhow lagu siinayaa | allsanaag
Dhaqaalaha Puntland ma danbiile ayaa magdhow lagu siinayaa
Ma Majeerteen ayeenu is dhiibnay mise maamul ayeenu wada samaysanay?
Dhowaan ayeey ahayd markii Agaasimihii Hay’addii Puntland ee BSF Maxamuud Diyaano, xilka laga qaaday uu isaguna diiday inuu xilka ka dego, maalin ka dibna ay qaar ka mid ah Isimada Majeerteen ay ku taliyeen in magdhow Gaadiid iyo Guryo ah la siiyo wiilka ay u arkaan in laga gardaran yahay mar haddii shaqdiauu aabihii uga dhintay laga qaaday.
Agaasimaha Xilka laga qaaday kuma uuna joogin amar diidkii dawladda Puntland ay beeluhu wada samaysteen, ee wuxuu madaafiic aan loo aabo yeelin ku garaacay jihooyinka magaalada Boosaaso, ee aan ka ahayn dhanka waqooyi ee ah Badweynta Hindiya.
Wiilkii sidaa u dhaqmay ee argagaxa ku riday Bulshada Boosaao, maanta Isimaddii iyo Siyaasiyiintii Majeerteen, waxay Boosaaso u joogaan siddi ay u raali geli lahaayeen Maxamuud Diyaano, walaakiis iyo Hooyadood.
Hadaba maxaa ka horeeyey Xil ka qaadista Agasimaha Maxamuud Diyaano, ee ka soo jeeda beesha Majeeteen. Waxa ka horeeyey Xil ka qaadistii Gudoomiyihii Baarlamanka Puntland Cabdikariim Dooba daareed, oo hayey xilka ugu sareeya ee beesha Warsangeli ee ku salaysan wax wada qaybsiga beelaha Puntland oo inta hoygissii la duqeeyey, dadna lagu dilay , sidaasna xilka looga qaaday. Majirin beel isu habar wacatay xil ka qaadista Gudoomiyaha, taa bedelkeeda inta bulshada gobolka Sanaag waxay taageereen maamulka Puntland oo ay markaa is hayeen koox Federaalka ah oo doonaysaay inay maamulka burburiyaan oo beelaha iska hor keenaan.
Qaylo dhaanta ay Isimada iyo Siyaasiyiinta beesha Majeerteen ay maanta isugu habar wacdeen ee marmarsiinyo ka dhiganayaan Puntland ayaa la bad baadinayaa, ma jirin maalintii Dhooba daareed xilka laga qaaday, ma jirin baqdin beeleed oo sida Boqor Burhaan iyo In Diyaano laga baqayey inay Boosoo iyo Garowe madaafiic la dhacayaan
Waxa xilka isagana laga laga qaaday maalintaas Cabdi Jamaal. oo ka mid ahaa Xildhibaanda laga soo doorto gobolka Hayland.
Cabdi Jamaal wuxuu ka mid ahaa hogaamiyaashii diiday in khayraadka Buuraha Cal madow la boobo oo loo samaysto maleeshiyaad kuwa baaranaya ilaaliya . Waxa laga dilay intii Qoyska reer Diyaano haysteen ha’ayadda BSF Wiil uu dhalay, walaalhiis la dhashay Axmed Caalim iyo Cali Nirig. Waxa lagu dilay Boosaaso iyo Buuraha Calmadow. Waxa la dilay walaakiis kale, oo ahaa Taliyihii saldhiga Booliiska Biyo kulule Axmed Xasan Xaaji Dhoonge. Lama yaqaan wax dilay, ilaa maanta cid looma qaban dilalakaas, Magdhowna hadalkeeda daa
Waxa la dilay nabadoonkii Galgala, waxa lagu dilay Boosaaso. Lama yaqaan waxa dilay nabadoon Allah ha u naxriistee Xusee Gurhan. Waxa la dilay oo aan la aqoon waxa dilay Cali Diib, Saalax Sool, Adan Jaamac Sool Faysal Cakaal, Cige Dheere, Bucurde, Jaamac gaab iyo in badan oo kale oo ka soo jeeday Beesha Warsangeli, cidda dishay lama yaqaan waxaana lagu dilay Boosaaso iyo Galgala . Waxa ka mid ahaa dadkii kale ee la dilay taliye ku xigeenkii Ciidanka Booliiska Puntland Allah ha u naxariisto Jaamac Saxardiid.
Waa Gurigii Cabdi Jamaal ee magaalada Boosaaso, oo dagaalkii Majayahan ka dib madaafiic lala dhacay
Xildhibaanka intaas oo dhibaato ah ay ku dhacday, wuxuu ahaa abaanduulihii ugu horeeyey ee la dagaalanka argagixisada, wasiir ku xigeenkii amniga, la taliye madaxweyne iyo markii ugu danbaysay oo uu ahaa aha Xildhibaan beeli soo dooratay oo inta maamulku xilka ka qaaday ku yidhi dadkaaga dhinac ka raac,.
Sidee ku dhacaday in Ina Diyaano oo aan hal qof uga dhiman Buuraha Calmadow, waxay dilaan maahee, darajona ahaa agaasime dhaxal ku helay xilka, in maamulka Puntland magdhow siiyaan, Xildhibaan Cabdi jamaalna lagu yiraahdo dadkaaga dhinac ka raac .
Hadaba in beesha reer Maakhir ay Majeerteen isu dhiibeen iyo inay maamul wada samaysteen, waxa la ogan doonaa sida ay uga jawaab celiyaan Hadalkii Boqorka Majeerteen ee ahaa Magdhow ha la siiyo Wiilka ay ilmo adeerta yihiin ee Ina Diyaano ee xilka laga qaaday cidna aan laga dilin.
Ugu danbayntii, dadkii ugu badnaa ee ku dhintay gobolka Bari inta la xasuusan yahay ee ka soo jeeda beesha Warsangeli waxay dhinteen intii maamulka Puntland jiratay 1998 ilaa 2016 . Waxa in laga xumaado oo laga dhiidhiyo ah in Isimaddii iyo siyaasiyiintii Majeerteen oo intaas oo dhacdo joogay oo Markhaanti ka ahaa, oo aan maalin ka hadlin inay maanta u fadhiyeen Boosaaso sida ugu fiican ee magdhow loo siin lahaa AGAASIME xilka laga qaaday , iyaga oo isticmaalaya dhaqaalaha maamulkii la wada samaystay
← Deni oo garay Muqdisho Ciidan loo dhan yahay ayaa loo baahan yahay →
5 thoughts on “Dhaqaalaha Puntland ma danbiile ayaa magdhow lagu siinayaa”
Abdirisag Farah Gaas December 31, 2021 at 02:49
Majeerteenka aad faquuqayso ma ilowsantahay in magaca la wadaagto oo haddii ay khaldan yihiin iskama bari yeeli kartid. Kolka nin walaalkaa ah cadow lagama dhigto. Xaq waa u leedahay in gadaanka ku qabsatid adiga iyo wall waxa idinka dheexeeya. Aniga shakhsiyan nin reer maakhir iigama duwana Majeerteenka kale oo niman ii siman dhibna lama jecli in si ka duwan dadka ay wada dhasheen loola dhamo ma fiicna.
Waxaad ogaata in adigu la xisaabtanto nimankaa add mar Walaal tihiin marma ilaahay meerl idinku wada beeray oo aan kala tegi karin.
Fidno lama kiciyo oo dad ehel ah oo deris ah is dhalay oo wiil iyo abtigii arrimo siyasadeed lagu kala geeyo. Kolka xisaabtan wax sax nin gurigaaga kugu iman oo ku oran waxaan baa dhacay ma jiro laakiin waa in adigu garaacdaa albaabkii ay dani kaa gasho adigoo.wixii ka dhacay boosaaso waa masuuliyad darro la mid ah tii dhoobdareed iyo tii barlamaanka rag looga saaray.
Abdijamaal waxa ku leeyahay tariikhda puntland baaldhab ah haddii maanta nin ay xagga fikirka siyasadda isku qabteen uu ku xad gudbay tariikhda ayaan iloobayn. Maalin maalmaha ka mid ahna waa helaayaa magaca iyo maamuuska uu ku leeyahay puntland.
Bureeqada Puntland December 31, 2021 at 12:00
Ku midka websightkaan uu u furanyahay
Ugu horrayn walaal. Majeerteen waa dad walaalo aad tihiin waa haddii aad ka dhalatay walaalahayo Warsangeli?? Markaa waa kugu ceeb aflagaaddo iyo jaahilnimo inaad walaalkaa xasad iyo cadaawad u qaaddo. Laba nin oo walaalo ah waakuwiii horumarkooda kuwada farxa ceebtooda dibudhacooda iyo jabkoodana kawada xumaada. Dhib iyo dheefna u wada jira cadowgoodana wadajir iskaga difaaca
Horumarka iyo maqaamsare haddii Allaah siiyo Majeerteen waa Warsangeli oo sharaf iyo maqaamsare gaarey ama leh waayo waa dad walaalo ah Midda kale haddii walaalkaa hoggaanka dalka iyo dadka kuu hayo masuuliyad iyo xil baa saaran Wuxuu kaa mudanyahay inaad ku taageerto oo wax la toostoosiso ee ma ahan inaad cay iyo xasarad abaal uga dhigto
Warsangeli ha hoggaamiyo Puntland Majeerteen dhib uma arko oo culayska eedda iyo xilka culus baaba ka wareegaya
Ee bal xilkasnimadaa iyo hoggaaminta Puntland la imoow
Yasin January 1, 2022 at 01:04
Walaalo Majeerteen waxba iskamaa oga . Laf walba danteeday difaacataa. Puntland waa la wada leetahaye waa la wada difaacdaa. Doobo Daareed haddii sida ilma Diyaano Deni Qalka u geli lahaa oo iska celin lahaa. Majeerteen Keliya maahee , Daarood oo dhan ayaa isagu iman lahaa kala qabashadooda. Marka adaa Puntland marti iska dhigayee. Waxan u oran lahaa cadkaaga dhacso, amniga guud ee Puntland dhinacaaga ka difaac.
Ahmed January 10, 2022 at 15:58
Marka u horeeysa waxaan Allah uga baryayaa inuu u naxariisto intii dimatay ee halkaan lagu sheegay iyo inta kale ee aan la magacaabin. Mowtidu qabiil malaha
ee way qanaagsanaan lahayd in la xuso inta kaloo ka soo jeedey Majeerteen.
Qabiil kastaa waa leeyahay dad xun iyo dad fiican.
Arintii ka dhacday Bosaaso waxay ahayd arin mudo soo socotey oo ay keentay maamul xumo aan weligeed la sixin. Waxaa daneecad inoo ah in marka wax dhacaan la qayliyo ee aanan xumaanta marka hore la diidin.
Anigu waxaan aaminsanahay in puntland maamulku xumaaday oo aan reer dusha laga saari karin waayo cid walbaa ku dulman.
Mudo badan ayaa allsanaag iska daayey in qabiil dadka reer puntland loo kala saaro, waxaanse arkaa in haatan wixii hore dib loogu noqday.
Mar hadii la hagaajisan waayey maamulkii la wada dhistay oo ceeb ina wada haysata walaal.
Reer bari January 11, 2022 at 17:18
Anigoo ka soo jeeda Majeerteen waxaan marka hore qirayaa in arrinka boqor Burhaan uu ugu hiiliyay ini Dayaano ay tahay qalad, ina Dayaanona waa jirri xaalkiisu tahay ku qabso ku qadi meyside. Taasoo jirta ayaan waxaan kuu sheegi lahaa walaalkayga qoritaanka sameeyayoo in Warsangeli iyo Majeerteen ay yihiin walaalo wada dhashay, is dhalay oo Puntland wada dhistay. Kuguma raacsani inaad arrinka ka dhigto Majeerteen oo aad dhammaantood israacsiiso. Xataa arrinku ma taagna Cismaan Maxamuud. Haddii qof ama labo gafaan ma Majeerteen oo dhan baa gafay? Ka warran haddaan iraahdo dhowrka nin ee Warsangeli ee SNM isu dhiibay waxay matalaan Warsangeli oo dhan? Ma sax baa? Marka walaal is deji waxaynu nahay walaalo aan kala maarmine.